NgoSeptemba 2021-Funda ukuRhweba
Inyanga: Septemba 2021
IDola idibanisa iiNzuzo, ukuTshintshela ingqalelo kwi-Euro
Njengoko iDollar igaya ukutya okuxhaswe sisivuno kule veki, ukuthengisa ingqalelo kutshintshele kwi-Euro, ngakumbi kwiimarike ezinqamlezileyo. Okwangoku, ukwanda kweemvakalelo zomngcipheko kunceda iimali zorhwebo kunye ne-Sterling, ngedola yase-Australia ekhokela ipakethi. Kwimeko ezinzileyo yomngcipheko, i-yen kunye ne-Swiss franc zihlala zibuthathaka.
The izinga lokungasebenzi kwi-Eurozone yehle ukusuka kwi-7.6% ukuya kwi-7.5% ngo-Agasti, eyayingaphantsi kune-7.6% eyayilindelwe. Izinga lokungaqeshwa kwe-EU lehle ukusuka kwi-6.9% ukuya kwi-6.8%.
I-Eurostat iqikelela ukuba i-14.469 yezigidi zamadoda nabasetyhini babengasebenzi kwi-EU ngo-Agasti 2021, apho i-12.162 yezigidi yayingasebenzi kwi-Eurozone. Xa kuthelekiswa noJulayi 2021, inani labantu abangasebenziyo kwi-EU lehle ngama-224,000, kwaye inani labantu abangasebenziyo kwi-EU lehle ngama-261,000. Indawo yeZolimo.
Idatha ekhutshwe ngaxeshanye ibonise ukuba inqanaba lokungabikho kwemisebenzi eJamani lehle nge -30,000 ngoSeptemba, xa kuthelekiswa nokulindelweyo -40,000. Izinga lokungabikho kwemisebenzi lihleli lingatshintshanga kwi-5.5%.
I-CPI yase-Jamani yase-Jamani inyuke nge-4.1% unyaka nonyaka, ngaphezulu kokulindelweyo kwe-3.9%. Izinga lokungabikho kwemisebenzi e-Italiya alitshintshanga kwi-9.3%. E-France, inkcitho yabathengi inyuke nge-1.0% ngenyanga-ngo-Agasti kwaye kulindeleke ukuba inyuke nge-0.1% ngenyanga-ngenyanga.
IDola eqhekeza amaNqanaba oKhuselo aPhambili, IziVuno zihlala zizinzile
Idola liphantsi kancinci kwiseshoni yaseAsia, kodwa lihlala liyimali eyomeleleyo kule veki. I-rally ye-treal isivuno ibonakala ngathi iyacotha. Nangona kunjalo, isivuno seminyaka eli-10 sisesiphatheni se-1.54, kwaye isivuno seminyaka engama-30 ngokufanayo singaphezulu kwesibambo se-2.0. Ilizwe lesibini elibalaseleyo yiCanada, lilandelwa yi-Australia. Idola yaseNew Zealand, kwelinye icala, iye yaqhuba kakuhle kakhulu, ilandelwa yiSterling kwaye ekugqibeleni yiYen. Njengoko inyanga isondela esiphelweni, abathengisi bangaqala ukubiyela ukubheja kwabo kwiveki elandelayo.
USan Francisco Fed uMongameli uMary Daly uthe, “Ekupheleni kwalo nyaka, ukuba imeko yezoqoqosho iyaqhubeka nokukhula ngendlela endilindele ngayo, ndiyathemba ukuba kufanelekile ukuba siqale ukubuyisa" ukuthengwa kweeasethi " kamva kulo nyaka.
UDaly ukwabonakalise ukuba iFed isete umda owahlukileyo kunye ophezulu wokunyusa inzala. "Ukuba singayiphumeza le njongo kwisithuba sonyaka ozayo, iyakuba luloyiso olukhulu kuqoqosho," utshilo, "kodwa andicingi ukuba le iyakuba njalo."
Ngokobuchwephesha, isibini se-EUR / USD siphule amanqanaba enkxaso yexesha eliphakathi eli-1.1602. I-GBP / i-USD iphinde yaqhekeka nge-1.3482, inqanaba lokumelana nexesha eliphakathi eliye ngoku lajika laba yinkxaso. Kwangelo xesha, isibini se-USD / JPY saqhekeka kwinqanaba eliphakathi le-111.71. Umbuzo ngoku ngowokuba ingaba iDollar inokuhlala ngaphezulu kwala manqanaba kwaye iqinisekise ukubuyela umva kwexesha eliphakathi ukuya kwelide.
I-AUDUSD iyaqhubeka nokunyuka phakathi kweMbono yeNtengiso eNgwenxa
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Septemba 30
Ngexesha leseshoni yaseMelika, i-AUDUSD yafumana ukubambeka kwaye yenyuka yaya kwi-0.7257, iphakamileyo elitsha lemihla ngemihla elixhaswa kukuhla okubanzi kwedola yaseMelika. Inkqubo ye- DXY iphantsi kweepesenti ze-0.20, ephawula okokuqala ukuba iye yehla kulandela iintsuku ezine zokufumana. Ngaphandle kweziqhamo ezizinzileyo ze-US kunye neemarike zokulingana ze-US, iidola zase-US zehlile.
Amanqanaba okumelana: 0.7557, 0.7450, 0.7350
Amanqanaba enkxaso: 0.7150, 0.7050, 0.6900
I-AUDUSD yexesha elide iTrend: Ukutshintsha
Inqanaba elikwi-0.7300 ngumsebenzi olucelomngeni wokuba iinkunzi ze-AUDUSD zijongane nazo kuba ngumdibaniso wenqaku lemihla ngemihla kunye nenombolo ejikelezayo. Kwikhefu elingaphezulu kokugqibela ngoSeptemba 23, iinkunzi zeenkomo zinokuzama kwakhona ukuphakama kwinqanaba eliphakathi le-0.7478.
Kwelinye icala, imihla ngemihla ephantsi ye-0.7169 inokusebenza njengenqanaba lokuqala lenkxaso, ekunokuthi kuvavanywe isezantsi se-0.7150. Nangona kunjalo, amaxabiso ahamba kwitshathi yemihla ngemihla ahlala ethembile, ebonisa ukuqala kokuthengwa kokuntywila.
I-AUDUSD yeXesha elifutshane leNdlela: Ukulinganisa
Umkhethe we-intraday we-AUDUSD ulungile, ngelixa umkhwa uhlala ungathathi hlangothi. Umkhwa wokulungisa ukusuka kwinqanaba le-0.7478 kulindeleke ukuba ube nokunye ukuncipha okukhulu ngaphambi kokuba ulungiso lomkhwa. Ngokubanzi i-AUDUSD ihlala kwindawo yokulungiswa embindini. Singabona ubungqina obolulekileyo ukusuka kumgangatho ophakamileyo we-0.7300 / 0.7350.
Ujoliso lokuqala, kwelinye icala, linqanaba lenkxaso le-0.7150 phantsi kwamanqaku ayi-0.7200. Nangona kunjalo, ukuba inqanaba le-0.7300 laphulwe ngokuphindaphindiweyo, lonke ukonyuka kwinqanaba le-0.7169 linokubuyiselwa. Utshintsho olukhulu kubarhwebi be-bearish banokujongwa njengesixhobo esitsha sokuvula, kuvula indlela yokwehla kwezinto ezothusayo zeveki kufutshane ne-0.7170 uphawu.
tags AUDUSD, Uhlalutyo Technical
IDogecoin (DOGE) iFluctuates Phezulu kwe-0.20 yeNkxaso, ukuhla ukuya kwi-0.16 yeedola kusenokwenzeka
IiDogecoin's (DOGEIxabiso lihle laya kwi-0.20 yeedola emva kokophula isiseko esisezantsi kwi-0.21 yeedola, namhlanje i-crypto inyuka ingaphezulu kwenkxaso ye- $ 0.20. Ngaphambi kokuwa kwexabiso kutshanje, ixabiso le-DOGE laqhekeka ngaphantsi kwenkxaso ye- $ 0.21, layiphinda ngaphambi kokuphinda uqalise ukwehla. Okwangoku, i-altcoin sele ithengisa kancinci. Okwangoku, ngoSeptemba 7 ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOGE iya kuwela kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-0.14 yeedola.
Ixabiso le-DOGE line-crossover ye-bearish. Iintsuku ezingama-21 ze-SMA zinqumleza ngaphantsi kweentsuku ezingama-50 zeSMA. Oku kubonisa umqondiso wokuthengisa. I-altcoin iwele kwinqanaba le-36 ye-Relative Strength Index period 14. Ibonisa ukuba i-altcoin ikwindawo ye-downtrend kwaye isondela kwingingqi ethe kratya. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla ezantsi zibonisa ukwehla.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso le-DOGE liwela ezantsi, isenzo sexabiso sibonakaliswa zizibane ezincinane zomzimba ezibizwa ngokuba yiDoji. Iziphatho zezibane zeDoji zidibanisa ngaphezulu kwenkxaso ye- $ 0.20. . Okwangoku, ngoSeptemba 7 idowntrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOGE iya kuwela kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-0.14 yeedola.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 isebenza ngokunganyangeki kwixabiso le-DOGE. I-DOGE ingaphezulu kwe-70% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ingqekembe ikwisantya esiphezulu. Oku kuchasene ne-bearish trend. Ixabiso le-DOGE lingaphantsi kweentsuku ezingama-21 ze-SMA kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 ezibonisa ukuhla okuya ezantsi.
I-Dogecoin kusenokwenzeka ukuba iqhubeke nokuwa njengoko urhwebo lwe-crypto lwenzeka kwindawo ye-bearish. Okwangoku, i-altcoin iphinda ibuyise inkxaso eyi- $ 0.20 eyixabiso lembali ka-Agasti. Ikhefu elingaphantsi kwe- $ 0.20 yenkxaso iya kubangela ukuba i-altcoin yehle iye kwi-0.16 yeedola.
Imali yedijithali iluncedo kuQoqosho lweHlabathi: Ingxelo yeBIS
Ingxelo entsha epapashwe yiBhanki yokuHlaliswa kwaMazwe ngaMazwe (i-BIS) kunye neqela leebhanki ezingoovimba bathi imali yedijithali inokukhuthaza ukuhlaliswa kwabantu ngokukhawuleza kunye nokuhanjiswa okungabizi kakhulu.
Malunga neeveki ezimbini ezidlulileyo, umphathi we-Bank of International Settlements (BIS) Innovation Hub, u-Benoît Cœuré, uqinisekisile ukuba iibhanki eziphambili kufuneka zithathe igunya kwaye ziphuhlise i-Central Bank-Ikhutshwe i-Digital Currencies (i-CBDC). Cœuré uchaze ukuba imali yedijithali Uqoqosho sele lukhona kwaye iibhanki ezingoovimba zisala zikuthathela ingqalelo oko "Ii-CBDCs ziya kuthatha iminyaka ukuba zikhutshwe."
Ukulandela la magqabantshintshi avela kwisigqeba sebhanki, i-BIS, ibambisene neebhanki ezine eziphambili ezivela e-United Arab Emirates, eHong Kong, e-China nase-Thailand, baqalise uvavanyo lwemali yedijithali.
Emva kokuvelisa kunye nokuvavanya iprototype ebizwa ngokuba "Iprojekthi yebhulorho yedigital currency block (mBridge)," iqela lipapashe ezinye iziphumo ezinomdla. U-Bénédicte Nolens, intloko yeziko lase-Hong Kong le-BIS Innovation Hub, uchaze ukuba iimali zedijithali zinokusebenza ngakumbi kushishino lwebhanki kwaye ziya kuphakamisa uqoqosho ngokubanzi.
Kwingxelo epapashwe ngoMvulo, uNolens uqaphele ukuba: “Ukwenza intlawulo ekhawulezayo nexabiso eliphantsi yokuwela umda, kubandakanya nemimandla engazuzanga kwinkqubo yokubhankisha yembalelwano, kungaluncedo kurhwebo nakuphuhliso lwezoqoqosho.”
Ibhanki ityhile ukuba abaphuhlisi baphehlelela i-mBridge prototype kwi-Ethereum's Hyperledger Besu blockchain.
Intengiselwano yeMali yedijithali kwi-DLT iipesenti ezingama-50 zisebenza ngakumbi kunenkqubo yesiqhelo yokuhlawula umda weBorder
Ngokweemvavanyo, ukusasazwa kwetekhnoloji ye-ledger (i-DLT) kunciphisa iindleko zentengiselwano yomda nge-50%, kwaye iindawo zokuhlala ziyagqitywa ngemizuzwana.
Okwangoku, iqela liphethulele ingqalelo yalo kwimicimbi yezomthetho nakwimiqobo yezolawulo ekuphuhliseni "Isisombululo esilungele ukuveliswa kwemali yedijithali." Into enomdla kukuba iprojekthi yeBridge iza phakathi kokumiliselwa kwe-Yuan yedijithali, ekufutshane nasekugqityweni.
Intsebenziswano yeBridge iqale yaqalwa yiBhanki yaseThailand kunye neGunya lezeMali laseHong Kong phantsi kwegama "IProjekthi Inthanon-LionRock."
Umzi-mveliso we-Bitcoin Mining e-US unokuxhamla kwi-Ban yangoku e-China: USodolophu wase-Florida
USodolophu waseMiami, eFlorida — uFrancis Suarez — ukholelwa kwelokuba uza kulwa Bitcoin (BTC) kunye ne-cryptocurrency ngurhulumente waseTshayina lithuba elibalulekileyo kwimakethi yaseMelika yokusebenzisa.
Usodolophu, ngoku osebenza ekwakhiweni kwesixeko sakhe kwi-Bitcoin hub, uxelele iBloomberg ukuba:
Inguquko ngoku. Idala ithuba elihle eMelika. ”
USodolophu uSuarez wongeze wathi: “I-China ukuvala i-bitcoin yimpazamo enkulu eneempembelelo eziza kuziva kwizizukulwana ngezizukulwana. Ukuphulukana kwabo kuyinzuzo yethu, kwaye iMelika inakho kwaye izakukhokelela kwikamva ngokubonelela ngekhaya elicocekileyo labasebenzi beemigodi i-bitcoin nabo bonke abakha kwi / nge / nge-bitcoin. ”
Amanye amagosa aseburhulumenteni e-US nawo abona isenzo sakutshanje sikarhulumente wase-China njengethuba le-US. USenator Pat Toomey kutshanje uqaphele ukuba: “Ukuqhekeka kobuzwilakhe e-China kwi-crypto, kubandakanya ne-bitcoin, lithuba elikhulu e-US. Ikwasikhumbuza ngenzuzo yethu enkulu kulwakhiwo lwase China. ” Ngeli xesha, u-Congressman uPatrick McHenry wathi: "Isigqibo se China sokuthintela ukufikelela sinika ithuba elihle kubunkokheli baseMelika kwi-cryptocurrency."
Usodolophu ubhengeze ebutsheni bale veki ukuba kukho iingxoxo eziqhubekayo zokutsala abasebenzi basezimayini be-crypto eSouth Florida, kubandakanya izikhuthazi ezinje ngokukhetha amandla acocekileyo.
Amanqanaba aphambili eBitcoin aBonwayo-Septemba 30
I-BTC ibonakala ngathi yakhe umfutho wokunyusa njengoko i-cryptocurrency iphinda izame kumgca we-44,000 yeedola. I-BTC ithengiswe ngaphakathi 'komda othe tyaba' kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo, ibalaselisa ukungakhathali okhoyo.
Oko kwathethileyo, icala elikhethiweyo linokuba lixabiso eliphakamileyo ukuba iflegi yedijithali iphinda ivele ngaphezulu kwenqanaba lama- $ 44,000 namhlanje phakathi kwevoti ezayo kwiBhili yeZiseko zaseMelika. Silindele ukuqhubeka okunyusayo kwiiyure ezizayo ukuya kwindawo eyi- $ 46,000 okanye kwi-200 SMA yethu.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 44,000, i- $ 44,400, kunye ne- $ 45,000, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 43,000, $ 42,000, kunye ne- $ 41,000.
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 817 billion
Ukungatshintshi (i-UNIUSD) Ixabiso: Iintshukumo zeNtshukumo eziNciphisayo kwinqanaba le- $ 17, ngoMeyi uqhubeke ukuya kwi- $ 30
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-Septemba 30
Ixabiso linokungena kwinqanaba lokumelana ne- $ 26 kwaye inyuke iye kumanqanaba oxhathiso lwe- $ 30 kunye ne- $ 37. Ukungakwazi ukungena kwinqanaba lokumelana ne- $ 26 ziinkunzi kunokubangela ukurhweba okuthe kratya okanye ukubuyela umva kumanqanaba enkxaso kwi $ 21, $ 17 kunye ne- $ 14.
Amanqanaba okumelana: $ 26, $ 30, $ 37
I-UNI / i-USD yexesha elide iTrend: Bullish
Ukungatshintshiswanga kukunyusa ixesha elide. Ukungatshintshi kuqhubeke ukuthobela umyalelo weenkunzi. Intshukumo ye-bullish yaqala nge-22 kaSeptemba kwinqanaba lenkxaso ye- $ 17. Le ngqekembe idlale ngendlela ebekuqikelelwe ngayo kwiveki ephelileyo; inqanaba lokumelana ne-21 yeedola laphulwe phezulu. Ixabiso liyenyuka kwinqanaba lokumelana ne- $ 26. Ixabiso lingaqhubeka ngokwanda njengoko ikhandlela lemihla ngemihla livula imakethi engatshintshiyo.
Itshathi yemihla ngemihla ye-UNIUSD, ngoSeptemba 30
Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA ebonisa ukunyakaza okunyukayo. Umndilili wokuhamba ngokukhawuleza (ama-9 amaxesha e-EMA) uwela umndilili wokuhamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA). Ixabiso linokungena kwinqanaba lokumelana ne- $ 26 kwaye inyuke iye kumanqanaba oxhathiso lwe- $ 30 kunye ne- $ 37. Ukungakwazi ukungena kwinqanaba lokumelana ne- $ 26 ziinkunzi kunokubangela ukurhweba okuthe kratya okanye ukubuyela umva kumanqanaba enkxaso kwi $ 21, $ 17 kunye ne- $ 14.
I-UNI / i-USD yeXesha eliPhakathi lokuHamba: Bullish
Ukungatshintshiswanga kukunyusa itshathi yeeyure ezi-4. Ingqekembe yavavanya inqanaba lenkxaso kwi- $ 17 kathathu; Ithetha ukuba le patheni yetshathi ingezantsi kathathu yenziwe. Le meko ibangele intshukumo yokuqhubela phambili kwipateni yetshathi yeeyure ezi-4. Inqanaba le- $ 21 lingene ngaphakathi kwaye ixabiso liya kwinqanaba lokumelana ne- $ 26.
Itshathi yeeyure ezi-4 ze-UNIUSD, ngoSeptemba 30
Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 EMA, ixesha lesalathiso samandla esi-14 sikumanqanaba angama-50 okugoba ukubonisa uphawu lokuthenga.
tags Marketing, Uhlalutyo Technical, I-UNIUSD
I-USDCAD ihleli kwiNdlela ePhezulu
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCAD-Septemba 29
I-USDCAD ihlala isendleleni eya phezulu njengoko iqhubeka ikhupha umgca wokunyuka. Le ndlela inyukayo inyuse intengiso ukuba icwangcise kwaye iqhubekeke ngokwamanqanaba okumelana nayo. Imakethi ke ibonwa ibonisa ukuphakama okungagungqiyo kunye nokuphakama okuphezulu. Nangona kunjalo, imarike yayivalekile ekubeni yenze ukuphakama okuphezulu okokugqibela ngenqanaba lokumelana ne-1.28800, kodwa ixabiso lisenza iphantsi kakhulu.
Amanqanaba aphambili e-USDCAD
Amanqanaba okumelana: 1.28000, 1.28800, 1.30330
Amanqanaba enkxaso: 1.26500, 1.24700, 1.23000
I-USDCAD yexesha elide yokuhamba: Bullish
Ingqekembe yaqala ukuphakama emva kokuba yehlile ukusuka ezantsi ekuxhaseni kwe-1.20300. I-USDCAD ibekwe ixesha elithile nge-1.21500 njengokumelana. Emva kwethutyana, kwavela ixabiso laza laya kuthi ga kwi-1.24700, emva koko laphinda labuyela kwi-1.23000. Ukusuka kule nkxaso, ixabiso emva koko lenze indlela yokunyuka kancinci kancinci ngaphezulu kwenqanaba lamaxabiso le-1.24700. I-USDCAD iyaqhubeka iphinda le patheni ukuze ihlale kwindlela yayo ephezulu.
I-USDCAD, ngale ndlela, ikwazile ukunyuka ukuya kwi-1.26500, ukusuka apho ngoku ijongene novavanyo lwe-sterner kwinqanaba lokumelana ne-1.28800. Inqanaba lokumelana lihlala liqinile ekuthinteleni ukunyuka okuphezulu ngaphezulu, kodwa ingqekembe iyaqhubeka nokwenza amaqondo aphezulu aphezulu. Umzuzu uhlala neenkunzi zeenkomo, njengoko kunokubonwa kwi-Relative Strength Index, ebonisa umgca wayo womqondiso ubukhulu becala ngaphezulu komgca ophakathi. Imakethi ngoku inyukile ukusuka kumgca wokuhamba kunye neStochastic Oscillator ikwabonisa imigca enqamlezileyo.
I-USDCAD yeXesha elifutshane leNdlela: Bullish
Ingqekembe isendleleni yayo enyukayo kwakhona yokujongana nokumelana ne-1.28800, kodwa ngaphambi koko, kufuneka iqale yaphule inqanaba le-1.28000. I-Stochastic Oscillator kwitshathi yeeyure ezi-4 inemigca enyuka nzulu kwingingqi ethengiweyo. Kukho ngoku umnqamlezo wemigca, okuthetha ukuba ixesha elincinci lokuphinda kubuyiselwe kwelinye ilizwe kunokwenzeka ukuba lenzeke. Isalathiso se-RSI sibonisa ukuba intengiso ihlala ikwi-4 yetshathi yeeyure ezi-XNUMX.
Imakethi iya kuwugqiba umjikelo wayo ngokufikelela kwi-1.28800 kwaye iya kujonga ukuba iqhubeke ngakumbi ukuqhubeka nokunyuka kwayo.
Phawula: Cryptosignals.org ayisiyo ingcebiso kwezemali. Yenza uphando ngaphambi kokutyala imali yakho kuyo nayiphi na impahla yezezimali okanye imveliso ebonisiweyo okanye umcimbi. Asinaxanduva lakho kwiziphumo zotyalo mali.
tags Itshathi yemihla ngemihla, Ulindelo lweNtengiso, Price Action, Uhlalutyo Technical, USDCAD
← Entsha izithuba1 2 ... 23 abaDala izithuba →